Republishing the article : Indiana kids learning English are getting less funding, more testing - Chalkbeat Indiana
<h1>Indiana kids learning English are getting less funding, more testing</h1> <p>Hayleigh Colombo and Shaina Cavazos, Chalkbeat Indiana</p> <time>Apr 23, 6:01am EDT</time> <p>Seventh grade at Indianapolis’ Northwest High School was going to beabig adjustment for Jel Lu Too: He wasanewly arrived Burmese war refugee straight fromacamp in Thailand who spoke no English and had never attendedaformal school.</p> <p>Now, he had to take Indiana’s state test during his first week in class.</p> <p>School officials said state and federal mandates left them no choice about whether to administer the exam. So the 15-year-old sat for the test even though he can’t read, write or speak in English.</p> <p>“Welcome to America,” said Jessica Feeser, who directs Indianapolis Public Schools’ program for English language learners, characterizing the message to the student. “Here, take this test.”</p> <p>A growing number of students like Jel Lu Too have flooded into Indiana in recent years, posing new challenges for schools that are already under pressure to boost test scores. The schools must retrain their teachers, change their instructional programs and learn new ways of communicating with families — all with far less financial support from the state than in the past.</p> <p>That’s because the state has slashed funding for English language learners by half over the last decade, atatime when the number of those students rose by 30 percent.</p> <p>The budget crunch and testing rules have advocates concerned about the way that Indiana handles its growing immigrant population.</p> <p>May Oo Mutraw’s family also fled civil war in Burma, forced from their home toarefugee camp in Thailand where classes were sometimes canceled because of bombing. Now, asaco-founder of the Burmese Community Center for Education, she supports refugees who attend school in Marion County — and she doesn’t like what she sees.</p> <p>“I feel the students are being marginalized, put aside,” Mutraw said. “The system as it is now is not going to work for many of the refugee students. Instead, it hurts them.”</p> <p>“We will only be free by education,” Mutraw said. “We will know when we are treated wrongly and we will know how to come together and makeachange.”</p> <p><strong>How the funding system works</strong>Good instruction for English language learners can be expensive, and advocates say Indiana simply isn’t spending enough. The state’s funding method has even drawn criticism from outside the state.</p> <p> Data source: Indiana Department of Education <br> Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Schools do receive extra state money for programs for students still learning English — this year about $87 per student for the roughly 55,000 students who qualify. But just eight years ago, schools got almost twice that amount, or $162 per student.</p> <p>Idaho hasasimilar share of English language learners, for example, but spends about $245.42 extra per student, according toanonpartisan group that tracks and compares state education policies, Education Commission of the States.</p> <p>The cuts have made it harder for educators to serve English language learners. Warren Township ELL teacher Carlota Holder said she has about 100 students on her caseload, and she travels between two schools helping students in four grade levels — demands that she said make it impossible for her to give each child the instruction time they deserve.</p> <p>“They are getting left behind,” she said. “They’re not supposed to be, but they are.”</p> <p>Funding for language learning programs also is more volatile in Indiana than in other states because it is not part of the basic school funding formula, making it vulnerable to negotiation in the biennial budget process. ESC reports that just nine states fund language learning this way. Other states have moved away from Indiana’s approach because it can be “more unstable and unpredictable,” according to the group.</p> <p>A proposal to hike support for language learners to $200 per student was included in the <a href="http://in.chalkbeat.org/2015/04/14/senate-budget-with-deep-cuts-for-some-schools-could-see-a-vote-wednesday/">Indiana Senate’s budget released earlier this month</a>, but not in the House budget, and its fate is uncertain.</p> <p>“When the dollars aren’t there to provide adequate support, schools struggle,” said Charlie Geier, who oversees the state’s english language learning programs for the Indiana Department of Education. “It’s not equitable by any means.”</p> <p><strong>Shifting federal requirements</strong>The funding cutbacks have come at the same time as the state has tightened the rules about testing English language learners.</p> <p>Until 2006, English language learners students could wait three years before taking ISTEP. Instead, they were given an alternative exam that didn’t figure into accountability grades for schools, and teachers could use portfolios of student work to show that they had mastered what they were taught if their test scores didn’t measure up.</p> <p>But that year, federal authorities put states, including Indiana, on notice for not having an adequate testing program for English language learners,amandate of the No Child Left Behind Act.</p> <p>To avoid sanctions, many states, including Indiana, simply began giving English language learners the same tests as everyone else.</p> <p>“Fairness isn’taword that the federal government uses,” said Indiana’s testing director, Michele Walker. “They just say, ‘These are the requirements.’ It’s up to us to provide supports.”</p> <p><strong>Graduation waiversacontroversial practice</strong>Some districts have foundaway for their English language learners to graduate despite struggling on state tests by usingacontroversial exemption to strict testing requirements.</p> <p>The state requires students to passa10th-grade English exam andaninth-grade algebra test to graduate from high school.</p> <p>But students who earn C’s in those courses can be freed from the requirement and earnawaiver instead — as long as they have earnedaC average in that subject, secur recommendations from their teacher and principal and jump throughaseries of other hoops.</p> <p>At Southport High School, which hasalarge number of English language learners, 54 seniors got waivers last year and graduated without passing state tests — all but two were English language learners who could not pass the English exam.</p> <p>State lawmakers have urged school districts to cut down of the use of waivers in recent years aftera2012 Indianapolis Star investigation found that Indiana districts have increasingly used them to boost schools’ graduation rates.</p> <p>But Southport Principal Barbara Brouwer said she thinks the waivers are helping English learners, not hurting them. Students who earn waivers go on to college, she said. Some pass advanced classes and get prestigious scholarships.</p> <p>“I cannot, in my heart of hearts, denyakidadiploma because language was their barrier when they arrived and they can’t passastate assessment,” Brouwer said. “There has to be some common sense. You have to consider where people start.”</p> <p><strong>Expectations and reality</strong>The state is also setting new, higher expectations for English language learners.</p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839954/seriespromo.jpg"></figure><p>Indiana adopted new English learning standards at the end of 2013 with the goal of better preparing all students with the academic or job skills they’ll need after graduation, regardless of their their language proficiency.</p> <p>The education department is currently training teachers across the state on the new standards.</p> <p>“Dumbing down the curriculum for that student is not the way to get there,” Geier said. “He might not be proficient in English, but that doesn’t mean he can’t understandacomplex concept.”</p> <p>A new emphasis on providing rigorous coursework to English learners is needed in schools, Feeser said.</p> <p>“You go from this system where we had standards, but nobody really used them — they’re just kind of there — toasystem where we’re trying to completely shift toaculture of shared ownership,” Feeser said.</p> <p>Mutraw said she believesastatewide conversation about the policies that affect English language learners is the only way to help them improve.</p> <p>“A lot more work needs to be done,” Mutraw said. “There’s no point in pretending that things are all right. Things are not all right. We have to work hard to make them all right.”</p> <p> </p> <p> </p> <p>Powered by <a href="http://www.typeform.com/?utm_campaign=typeform_HSWswZ&amp;utm_source=website&amp;utm_medium=typeform&amp;utm_content=typeform-embedded&amp;utm_term=English">Typeform</a><em>Thanks to </em><a href="http://luna360.com/"><em>LUNA</em></a><em> for providing the translation for this series.</em><br></p> <figure><img src="https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839960/luna.jpg"></figure><p><strong>Los niños de Indiana aprendiendo inglés están recibiendo menos fondos, más exámenes</strong><em>Defensores dicen que los niños inmigrantes no están recibiendo un trato justo en las escuelas de Indiana</em>El séptimo grado en la Escuela Secundaria Northwest de Indianápolis ibaaser un gran ajuste para Jel Lu Too: Él era un refugiado de guerra de Birmania recién llegado directamente de un campamento de Tailandia que no hablaba inglés y que nunca había asistidoauna escuela formal.</p> <p>Ahora, tenía que tomar el examen estatal de Indiana durante su primera semana de clase.</p> <p>Funcionarios de la escuela dijeron que mandatarios estatales y federales no les dejaron otra opción sobre si se debería administrar el examen. Así que el chico de15-años de edad, se sentó para el examenapesar de que no podía leer, escribir o hablar en inglés.</p> <p>“BienvenidoaEstados Unidos”, dijo Jessica Feeser, quien dirige el programa Escuelas Públicas de Indianápolis para estudiantes del idioma Inglés, caracterizando el mensaje al estudiante. “Ten, toma este examen.”</p> <p>Un número creciente de estudiantes como Jel Lu Too han inundado en Indiana en los últimos años, planteando nuevos desafíos para las escuelas que ya están bajo presión para impulsar resultados de los exámenes. Las escuelas deben capacitarasus profesores, cambiar sus programas de instrucción y aprender nuevas formas de comunicación con las familias – todo con mucho menos apoyo financiero del Estado que en el pasado.</p> <p>Eso es porque el Estado ha recortado los fondos para los estudiantes del idioma Inglésala mitad en la última década, en el momento en que el número de esos estudiantes se incrementó en 30 por ciento.</p> <p>Las reglas del presupuesto crisis y de pruebas tienen defensores preocupados por la forma en que Indiana maneja su creciente población inmigrante.</p> <p>La familia de May Oo Mutraw también huyó guerra civil en Birmania, fueron obligadosaabandonar su hogar para iraun campo de refugiados en Tailandia, donde las clases eran canceladas debidoalos bombardeos. Ahora, como una cofundadora del Centro Comunitario de Birmania por la Educación, que apoyaalos refugiados que asistenalas escuelas en el condado de Marion – yaella no le gusta lo que ve.</p> <p>“Siento que los estudiantes están siendo marginados, dejadosaun lado”, dijo Mutraw. “El sistema como lo es ahora, no vaafuncionar para muchos de los estudiantes refugiados. En lugar de eso, les duele”.</p> <p>“Solo seremos libres por la educación”, dijo Mutraw. “Vamosasaber cuándo se nos trata injustamente y sabremos cómo unirnos y hacer un cambio.”</p> <p><strong>Cómo funciona el sistema de fondos</strong>La buena instrucción para estudiantes del idioma inglés puede ser costosa, y los defensores dicen que Indiana simplemente no está gastando lo suficiente. El método de financiación del Estado incluso ha generado críticas desde fuera del estado.</p> <p>Las escuelas reciben dinero del estado adicional para programas para los estudiantes que aún están aprendiendo inglés – este año alrededor de $87 por estudiante por los cerca de 55 mil estudiantes que califican. Pero hace sólo ocho años, las escuelas recibían casi el doble de esa cantidad, o $162 por estudiante.</p> <p>Idaho tiene similitud de los estudiantes del idioma inglés, por ejemplo, pero gasta alrededor de $ 245.42 adicionales por estudiante, de acuerdo con un grupo no partidista que rastrea y compara las políticas de educación del estado, Comisión de Educación de los Estados.</p> <p>Los recortes se han hecho más difícil para los educadores al servicio de los estudiantes del idioma inglés. La profesora del Municipio de Warren, ‘ELL,’ Carlota Holder dijo que tiene alrededor de 100 estudiantesasu carga de trabajo, y ella viaja entre dos escuelas para ayudaralos estudiantes de cuatro diferentes grado – demandas que ella dice hacen imposible para que ella déacada niño el tiempo de instrucción que se merecen.</p> <p>“Se están quedando atrás”, dijo. “No se supone que debe ser así, pero lo están.”</p> <p>La financiación de los programas de aprendizaje de idiomas también es más volátil en Indiana que en otros estados, ya que no es parte de la fórmula básica de financiación de las escuelas, por lo que es vulnerableala negociación en el proceso presupuestario bienal. ESC informa que solo nueve estados dan fondos para el aprendizaje del idioma de esta manera. Otros estados han alejado del enfoque en Indiana, ya que puede ser “más inestableeimpredecible”, según el grupo.</p> <p>Una propuesta para obtener apoyo para estudiantes de idiomasa$ 200 por estudiante fue incluido en el presupuesto del Senado de Indiana publicadoaprincipios de este mes, pero no en el presupuesto de la Casa, y su destino es incierto.</p> <p>“Cuando los dólares no están ahí para proporcionar un apoyo adecuado, las escuelas tienen dificultades”, dijo Charlie Geier, quien supervisa los programas de aprendizaje del idioma inglés del estado para el Departamento de Educación de Indiana. “No es equitativa por cualquier medio.”</p> <p><strong>Requisitos federales cambiantes</strong>Los recortes de financiación han llegado al mismo tiempo que el estado ha endurecido las normas sobre los exámenes de los estudiantes del idioma inglés.</p> <p>Hasta 2006, los estudiantes que están aprendiendo inglés podían esperar tres años antes de tomar el ISTEP. En su lugar, se les dio un examen alternativo que no figuraba en la rendición de cuenta de calificaciones, y los maestros podían utilizar portafolios de trabajo de los estudiantes para demostrar que habían dominado lo que les enseñaron si sus resultados de las pruebas no estabanala altura.</p> <p>Pero ese año, las autoridades federales pusieronalos estados, incluyendo Indiana, en aviso por no tener un programa de exámenes adecuado para los estudiantes del idioma inglés, un mandato de la ley “No Child Left Behind.”</p> <p>Para evitar sanciones, muchos estados, incluyendo Indiana, simplemente comenzaronadarlesalos estudiantes del idioma ingles las mismas pruebas que los demás.</p> <p>“La justicia no es una palabra que el gobierno federal utiliza,” dijo la directora de exámenes de Indiana, Michele Walker. “Ellos sólo dicen:” Estos son los requisitos. “Todo depende de nosotros para proporcionar apoyos.”</p> <p><strong>Permisos especiales para graduarse, una práctica controvertida</strong>Algunos distritos han encontrado una manera para que sus estudiantes del idioma inglés se gradúenapesar de estar luchando en los exámenes estatales mediante el uso de una exención controvertida para los requisitos de pruebas estrictas.<br>El estado requiere que los estudiantes pasen un examen de inglés del décimo grado y una prueba de álgebra del noveno grado para graduarse de la escuela secundaria.</p> <p>Pero los estudiantes que obtienen C en esos cursos pueden ser liberados de la obligación y ganan un permiso especial – siempre y cuando se hayan ganado un promedio de C en esa materia, recomendaciones seguras de su maestro y director y pasaratravés de una serie de otras pruebas.</p> <p>En la secundaria Southport, que tiene un gran número de estudiantes de inglés, 54 estudiantes del cuarto grado recibieron permisos especiales el año pasado y se graduaron sin pasar los exámenes estatales – todos menos dos eran estudiantes de inglés que no pudieron pasar el examen de Inglés.</p> <p>Los legisladores estatales han instadoalos distritos escolares para reducir el uso de los permisos especiales en los últimos años después de que una investigación en el 2012, Indianapolis Star encontró que los distritos de Indiana los han utilizado cada vez más para aumentar las tasas de graduación de las escuelas.<br>Pero la directora de Southport, Bárbara Brouwer dijo que cree que los permisos especiales están ayudandoalos estudiantes de inglés, no haciéndole daño. Los estudiantes que obtienen permisos especiales vanala universidad, dijo. Algunos pasan clases avanzadas y obtienen becas de prestigio.</p> <p>“No puedo, en mi corazón de corazones, negaraun niño un diploma porque el lenguaje era su barrera cuando llegó y no puede pasar una evaluación estatal”, dijo Brouwer. “Tiene que haber algo de sentido común. Usted tiene que considerar donde comienzan las personas”.</p> <p><strong>Expectativas y realidad</strong>El estado también está estableciendo expectativas nuevas y más altas para los estudiantes del idioma inglés.</p> <p>Indiana adoptó nuevos estándares para el aprendizaje del inglésafinales del 2013 con la meta de mejor prepararatodos los estudiantes con las habilidades académicas o de trabajo que necesitaran después de graduarse, sin importar sus capacidades en el idioma.</p> <p>El departamento de educación se encuentra entrenando maestros en todo el estado con estas nuevas normas.</p> <p>“Embruteciendo el plan de estudios para el alumno no es el camino para llegar”, dijo Geier. “Él podría no ser competentes en Inglés, pero eso no significa que no puede entender un concepto complejo.”</p> <p>Se necesita un nuevo énfasis en proporcionar cursos rigurososalos estudiantes de inglés en las escuelas, dijo Feeser.</p> <p>“Se pasa de este sistema donde tuvimos normas, pero nadie realmente las usaba – son estaban allí –aun sistema en el que estamos tratando de cambiar por completoauna cultura de propiedad compartida”, dijo Feeser.</p> <p>Mutraw dijo que cree que una conversaciónanivel estatal sobre las políticas que afectanalos estudiantes del idioma inglés es la única forma de ayudarlesamejorar.</p> <p>“Hay que hacer mucho más trabajo”, dijo Mutraw. “No tiene sentido pretender que las cosas están bien. Las cosas no están bien. Tenemos que trabajar duro para hacerlas bien”.</p> <p><strong>အင်ဒီယားနားမှာ ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်ထောက်ပံ့ကြေးပိုနည်းသွားသည်၊ စာမေးပွဲပိုများလာသည်၊</strong><em>အားပေးကူညီသူများက ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကလေးများအတွက် အင်ဒီယားနားကျောင်းများမှာ မျှတမှုမရရှိပါ</em>အင်ဒီယားနားဖလစ်၏ အနောက်မြောက် <strong>Northwest</strong> အထက်တန်းကျောင်းမှာခုနစ်တန်းတက်ရန် ဂျဲလူထူးအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကြီးတခုဖြစ်ပါသည်။ သူကအင်္ဂလိပ်စာလုံး၀မတတ် တရားဝင်စာသင်ကျောင်းတခါမှမတက်ရပဲ မြန်မာစစ်ပြေးဒုက္ခသည် တယောက်အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံစခန်းတခုမှမကြာသေးခင်ကဒိုက်ရိုက်ရောက်လာသည့်သူတယောက်ဖြစ်သည်။</p> <p>အင်ဒီယားနားအစိုးရစာမေးပွဲကို အခုသူကျောင်းစတက်သည့်ပထမအပတ်အတွင်းမှာစာမေးပွဲဖြေရမည်။</p> <p>ပြည်နယ်နှင့်ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ စာမေးပွဲဖြေခိုင်းမလားမဖြေခိုင်းဘူးလားဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်မပေးထားဘူးဟု ကျောင်း အရာရှိများကဆိုပါသည်။ အဲဒီအတွက် ထို ၁၅ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားက မဖတ်မရေးမပြောတတ်လည်း သူစာမေးပွဲဖြေရသည်။</p> <p>“အမေရိကန်မှကြိုဆိုပါတယ်” ဟု အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်း၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးအစီအစဉ် ကိုညွန်ကြားသည့်ဂျက်စီကာ ဖီးစာ<br><strong>Jessica Feeser</strong> ကပြောပါသည်။</p> <p>ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် အင်ဒီယားနားမှာ ဂျဲလူထူးလိုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများလာပြီး စာမေးပွဲအမှတ်ပိုကောင်းအောင်လုပ် ပေးရမည့်ဖိအားပေးမှုနှင့်ယဉ်ဆိုင်နေရသောစာသင်ကျောင်းများအတွက် အခက်အခဲအသစ်များထပ်ပေးသလိုဖြစ်လာသည်။ ကျောင်းများက သူတို့၏ဆရာဆရာမများကိုသင်တန်းပြန်ပေးရမည်။ စာသင်သည့်အစီအစဉ်များပြောင်းလဲရမည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားမိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုရန်နည်းလမ်းအသစ်ရှာရမည် – အားလုံးထဲက အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေး လွန်ခဲ့သောအချိန်ထက်အဆပေါင်းများစွာနည်းသွားသည့်ကြားထဲမှာလုပ်ရမည်။</p> <p>အဲဒါဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူအတွက် အစိုးရက လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကထောက်ပံ့ကြေး၏ထက်ဝက်ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက်ဖြစ်ပြီး ထိုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည့်အချိန်မှာဖြစ်သည်။</p> <p>ထောက်ပံ့ကြေးလျှော့ချခြင်းနှင့်စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူလူဦးရေတိုးလာ ခြင်းအပေါ် အင်ဒီယားနားကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေပုံကို အားပေးကူညီသူများကစိုးရိမ်ကြပါသည်။</p> <p>မေဦး မူတရော <strong>May Oo Mutraw</strong> ၏မိသားစုလည်း မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှထွက်ပြေးခဲ့ပြီး၊ သူတို့အိမ်မှထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့အတင်းအတမရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ သူတို့နေရပ်ဒေသမှာ ဗုံးအကြဲခံရသည့်အတွက် တခါတရံအတန်းများကို ရပ်ထားရသည်။ အခု၊ ပညာရေးအတွက်မြန်မာလူ့အသိုင်းအဝိုင်းစုဝေးရာဌာန <strong>Burmese Community Center for Education</strong> ကိုပူးတွဲဖွဲ့စည်းသူအဖြစ် မေရီယံကောင်တီမှာကျောင်းတက်နေသည့်ဒုက္ခသည်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး သူမြင်တွေ့ရ တာကိုသူမကြိုက်ပါ။</p> <p>“ကျောင်းသူကျောင်းသားများက ဘေးဖယ်ထားခြင်း၊ ဘေးဘက်ထုပ်ပယ်ထားခြင်းခံနေရတယ်လို့ ကျမခံစားရတယ်” ဟု မူတရော ကပြောပါသည်။ “အခုလက်ရှိစနစ်က ဒုက္ခသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားတော်တော်များများအတွက်အကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကျိုးဖြစ်မဲ့အစားသူတို့ကိုထိခိုက်တယ်။”</p> <p>“ကျမတို့က ပညာရေးနဲ့မှလွတ်မြောက်မယ်” ဟု မူတရောပြောပါသည်။ “ကျမတို့ကိုမတရားဆက်ဆံရင်ကျမတို့သိမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျမတို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မလဲဆိုတာသိရမှာပါ။”</p> <p><strong>ထောက်ပံ့ကြေးစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံ</strong>အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်ကောင်းသည့်သင်ကြားပို့ချမှုဟာ ကုန်ကျစရိတ်များနိုင်ပြီး အင်ဒီယားနားကလုံလောက်စွာမသုံး ဘူးဟု အားပေးကူညီသူများကပြောပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ထောက်ပံ့ကြေးနည်းစနစ်ဟာ ပြည်နယ်၏ပြင်ပအခြေားနေရာ အတွက်တောင်မှ ဝေဖန်စရာဖြစ်လာသည်။</p> <p>စာသင်ကျောင်းများက အင်္ဂလိပ်စာသင်နေသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးအပိုရရှိပါ သည် – ဒီနှစ်မှာ ထောက်ပံ့မှုရသင့်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၅၅၀၀၀ မှာ တယောက်ကို ၈၇ ဒေါ်လာခန့် ရရှိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ရှစ်နှစ်အချိန်က စာသင်ကျောင်းများဟာ အဲဒီငွေပမာဏထက်နှစ်ဆလောက် ကျောင်းသူကျောင်း သားတယောက်အတွက် ၁၆၂ ဒေါ်လာ ရရှိသည်။</p> <p>ဥပမာအနေဖြင့် အိုင်ဒါဟိုမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူလူဦးရေချင်းတူပါသည်။ သို့သော် ပြည်နယ်ပညာရေးမူပေါ်လစီများကိုစုဆောင်း ပြီးနှိုင်းယဉ်ကြည့်သည့်သီးခြားလွတ်လပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သောပြည်နယ်များပညာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့၏အဆိုအရ ကျောင်းသူကျောင်း သားတယောက်အတွက်အိုင်ဒါဟိုက၂၄၅²၄၂ ဒေါ်လာပိုသုံးသည်။</p> <p>ထောက်ပံ့ကြေးဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကိုကူညီဆောင်ရွက်ရန် ပညာသင်ပေးသူများအတွက် ပိုခက်ခဲစေ သည်။ ဝါရင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကအင်္ဂလိပ်စာဆရာမတယောက်ဖြစ်သူ ကာရ်လိုတာ ဟိုးလ်ဒါ <strong>Carlota Holder</strong> မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ရှိသည်။ စာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကို သွားလိုက်လာလိုက် အတန်းလေးတန်း မှာရှိသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကူညီသည် – ဒီလိုအပ်ချက်များကြောင့် ကလေးတယောက်ချင်းရသင့်သည့်အချိန်ပေး စာသင်ပေးရန် ဘယ်လိုမှမဖြစ်န်ိုင်ပါဟု သူပြောပြပါသည်။</p> <p>“သူတို့က အနောက်မှာချန်ထားခြင်းခံနေရတယ်” ဟုသူပြောပါသည်။ “သူတို့က အဲလိုမကျန်ခဲ့သင့်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ကျန်နေတယ်။”</p> <p>ဘာသာစကားသင်ပေးသည့်အစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလည်း အခြားပြည်နယ်ထက် အင်ဒီယားနားမှာပိုပြီးမတည် ငြိမ်ပါ။ အကြောင်းရင်းက အခြေခံပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးပုံသေနည်းမဟုတ်သည့်အတွက် နှစ်နှစ်တကြိမ်ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်ရေး ဆွဲရာတွင် ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ပြည်နယ်များပညာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့က ပြည်နယ်ကိုးခုမှာဒီလိုထောက်ပံ့ကြေးစနစ်မျိုးအသုံး ပြုကြသည်ဟု တင်ပြထားပါသည်။ အခြားပြည်နယ်များသည် အင်ဒီယားနား၏ချဉ်းကပ်ပုံမှပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပြီး။ အကြောင်းရင်း က ထိုအဖွဲ့၏တင်ပြချက်အရ “ပိုပြီးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြိုခန့်မှန်းရခက်ခဲ”သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။</p> <p>အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် ထောက်ပံ့သည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ သို့တိုးပေးရန်အဆို ပြုချက်ကို ဒီလအစောပိုင်းက အင်ဒီယားနားဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်၏ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်သည်။ သို့သော် အောက် လွှတ်တော်၏ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်မှာမပါပါ။ အဲဒီအဆိုပြုချက်၏ကံကြမ္မာဟာ မသေချာပါ။</p> <p>“ထောက်ပံ့မှုဖူလုံအောင်ဒေါ်လာငွေမရှိရင် စာသင်ကျောင်းများက ရုန်းကန်ရတယ်” ဟု အင်ဒီယားနားပညာရေးဌာနအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ပေးသည့်အစီအစဉ်များကိုကြီးကြပ်သူ ချာလီ ဂိုင်းရာ <strong>Charlie Geier</strong> ကပြောပါသည်။ “ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလုံလောက်ဘူး။”</p> <p><strong>ဖယ်ဒရယ်သတ်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲခြင်း</strong>ထောက်ပံ့ကြေးလျှော့ချသည့်တချိန်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူအတွက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပိုကြပ်လာသည်။</p> <p>၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူများအတွက် အိုင်းစတက်ခေါ်အင်ဒီယားနာတပြည်နယ်လုံးပညာရေးဆိုင်ရာ စာမေးပွဲအစီအစဉ် စာမေးပွဲမဖြေမီသုံးနှစ်စောင့်နေနိုင်သည်။ အိုင်းစတက်အစား အစားထိုးစာမေးပွဲဖြေပြီး ကျောင်းအတွက်တာဝန်ခံ အမှတ်စရင်းထဲထည့်မတွက်ပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏အမှတ်မမှီလျှင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသင်ရသည့်အရာများကို နားလည်တတ်ကျွမ်းမှုရှိကြောင်းသက်သေပြရန် သူတို့စာသင်သည့်မှတ်တမ်းစာရွက်စာတမ်းများအသုံးပြုလို့ရပါသည်။</p> <p>သို့သော် အဲဒီနှစ်မှာ၊ ဖယ်ဒရယ်အရာရှိများက အင်ဒီယားနားအပါအဝင်ပြည်နယ်အစိုးရများကို ဘယ်ကလေးမှမကျန်ခဲ့ရဥပဒေပြ ဌာန်းချက်အရ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင်မလုံလောက်ပါဟု သတိပေးသည်။</p> <p>အရေးယူမှုကိုရှောင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားအပါအဝင် ပြည်နယ်အတော်များများက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကို လူတိုင်းဖြေဆို သည့်စာမေးပွဲစဖြေခိုင်းပါတော့သည်။</p> <p>“တရားမျှတမှုစကားလုံးကို ဖယ်ဒရယ်အစိုးရမသုံးဘူး” ဟု အင်ဒီယားနားစားမေးပွဲညွှန်ကြားသူ မိရှဲ ဝါကါ <strong>Michele Walker</strong> ကပြောပါသည်။ “သူတို့က ‘ဒါတွေဟာသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်’လို့ပြောတယ်။ ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးဘို့တော့ ကျမတို့အပေါ် မှာမူတည်တယ်။”</p> <p><strong>ကျောင်းအောင်ရန်သက်ညှာခွင့်ပေးခြင်းသည်အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည်</strong>အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများက ပြည်နယ်စာမေးပွဲတွင်ရုန်းကန်ရသော်လည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်သောစာမေးပွဲသတ်မှတ်ချက်ကို အချို့ ဒေသများမှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်သောချွင်းချက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကျောင်းပေးအောင်မည့်နည်းလမ်းတွေ့ရှိပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရက ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အထက်တန်းကျောင်းအောင်ရန်အတွက် ၁၀ တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီး ကိုးတန်းအက္ခရာသင်္ချာစာမေးပွဲ အောင်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ချက်ချထားသည်။</p> <p>သို့သော် ထိုအတန်းများမှာ <strong>C</strong> အောင်မှတ်အဆင့်ရရှိလျှင် သတ်မှတ်ချက်များမှလွတ်ကင်းပြီးသတ်မှတ်ချက်အစားသက်ညှာခွင့် အစားထိုးရရှိသည် – သူတို့က ထိုဘာသာရပ်မှာပျမ်းမျှ <strong>C</strong> အမှတ်ရရှိခြင်း၊ ကျောင်းဆရာဆရာမနှင့်ကျောင်းအုပ်ထောက်ခံချက် ရရှိခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ကျော်သွားအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများရှိနေသမျှ သက်ညှာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။</p> <p>ဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူလူဦးရေများစွာရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မှာ နှောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသား ၅၄ ယောက်က သက်ညှာခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်နယ်စာမေးပွဲမအောင်ပဲ ကျောင်းအောင်ခဲ့သည် – နှစ်ယောက်မှလွဲပြီး အားလုံးက အင်္ဂ လိပ်ဘာသာရပ်စာမေးပွဲမအောင်နိုင်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်နေသူများဖြစ်ကြသည်။</p> <p>ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များမှာ ကျောင်းအောင်နှုန်းပိုကောင်းအောင် အင်ဒီယားနားစာသင်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများက သက်ညှာခွင့် အသုံးပြုကြသည်ဟု အင်ဒီယားနားဖလစ်စတားသတင်းစာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်ဥပဒေပြဌာန်းသူများက ကျောင်း များကိုသက်ညှာခွင့်သုံးသည့်နှုန်းလျှော့ခိုင်းသည်။ သို့သော်ဆောက်ပို့ကျောင်းအုပ် ဘားဘရာဘရိုးဝါအနေဖြင့် သက်ညှာခွင့်သုံးခြင်း ဟာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်၊ ထိခိုက်မှုမဟုတ်ပါဟုသူပြောပါသည်။ သက်ညှာခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သို့သွားကြသည်ဟုသူပြောပြပါသည်။ တချို့ကအဆင့်မြင့်အတန်းများ အောင်ပြီးအထက်တန်းပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိသည်။</p> <p>“ကျမသဘောကတော့ ကလေးများကိုသူတို့ရောက်လာသည့်အချိန်မှာ ဘာသာစကားကအဟန့်အတားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်နယ်စာမေးပွဲမအောင်နိုင်လို့ အောင်လက်မှတ်မငြင်းနိုင်ဘူး” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ “လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ရမယ်၊ သူတို့ ဘယ်နေရာမှစဝင်လဲဆိုတာထည့်စဉ်းစားပေးရမယ်။”</p> <p><strong>သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက်</strong>ပြည်နယ်အစိုးရလည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် ပိုတင်းကြပ်သောသတ်မှတ်ချက်အသစ်ချမှတ်သည်။</p> <p>အင်ဒီယားနားအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချမှုအဆင့်အသစ်တခု ၂၀၁၃ အကုန်မှာချမှတ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားအား လုံးကို ကျောင်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်းလိုအပ်မည့်စာပေသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများအတွက် ဘာသာစကားတတ် ကျွမ်းသည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေ ပိုကောင်းသည့်ပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးချမှတ်ခဲ့သည်။</p> <p>ပညာရေးဌာနက တပြည်နယ်လုံးမှာရှိသောကျောင်းဆရာဆရာမများကို အဲဒီသင်ကြားပို့ချမှုအဆင့်အသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် တန်းများပေးနေသည်။</p> <p>“သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဆင့်လျှော့ချခြင်းသည် ကျောင်းသူကျောင်းသားများရှေ့ဆက်ရန်အတွက်မကောင်းပါ” ဟု ဂိုင်းရာ <strong>Geier</strong> ကပြောပါသည်။ “အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းသူမတတ်ရင် မတတ်တဲ့အတွက် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသည့်အမြင်အယူအဆများကို သူနားမလည်ဘူးလို့အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။”</p> <p>အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် စာသင်ကျောင်းများမှာတင်းကျပ်သည့်စာသင်ကြားမှုဘက်ကို ဦးစားပေးရမည်ဟု ဖီးစာ <strong>Feeser</strong> က ပြောပါသည်။</p> <p>“ဒီလိုအဆင့်ရှိလဲ-ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်-ဒီကဘယ်သူမှမသုံးတဲ့စနစ်မှ၊ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သူယဉ်ကျေးမှုသို့လုံး၀ပြောင်းလဲဘို့ကြိုးစားနေ တဲ့စနစ်သို့သွားနေတယ်” ဟု ဖီးစာကပြောပါသည်။</p> <p>မူတရော <strong>Mutraw</strong> အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောမူပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အ လိုက်ဆွေးနွေးမှသာ သူတို့အတွက်တိုးတက်မည့်အထောက်အကူဖြစ်မှာကိုသူယုံကြည်သည်ဟုပြောပါသည်။</p> <p>“လုပ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်” ဟု မူတရောကပြောပါသည်။ “အားလုံးကောင်းနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ အရာရာတိုင်းကောင်းမနေဘူး။ အားလုံးကောင်းအောင် ကျမတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးရမှာ။”</p> <p>Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.</p> <link rel="canonical" href="https://in.chalkbeat.org/2015/4/23/21100657/indiana-kids-learning-english-are-getting-less-funding-more-testing" /> <img src="http://www.itjon.com/phppt/pixel.php?a=https%3A%2F%2Fin.chalkbeat.org%2F2015%2F4%2F23%2F21100657%2Findiana-kids-learning-english-are-getting-less-funding-more-testing" alt="" />
Indiana kids learning English are getting less funding, more testing Hayleigh Colombo and Shaina Cavazos, Chalkbeat Indiana Apr 23, 6:01am EDT Seventh grade at Indianapolis’ Northwest High School was going to beabig adjustment for Jel Lu Too: He wasanewly arrived Burmese war refugee straight fromacamp in Thailand who spoke no English and had never attendedaformal school. Now, he had to take Indiana’s state test during his first week in class. School officials said state and federal mandates left them no choice about whether to administer the exam. So the 15-year-old sat for the test even though he can’t read, write or speak in English. “Welcome to America,” said Jessica Feeser, who directs Indianapolis Public Schools’ program for English language learners, characterizing the message to the student. “Here, take this test.” A growing number of students like Jel Lu Too have flooded into Indiana in recent years, posing new challenges for schools that are already under pressure to boost test scores. The schools must retrain their teachers, change their instructional programs and learn new ways of communicating with families — all with far less financial support from the state than in the past. That’s because the state has slashed funding for English language learners by half over the last decade, atatime when the number of those students rose by 30 percent. The budget crunch and testing rules have advocates concerned about the way that Indiana handles its growing immigrant population. May Oo Mutraw’s family also fled civil war in Burma, forced from their home toarefugee camp in Thailand where classes were sometimes canceled because of bombing. Now, asaco-founder of the Burmese Community Center for Education, she supports refugees who attend school in Marion County — and she doesn’t like what she sees. “I feel the students are being marginalized, put aside,” Mutraw said. “The system as it is now is not going to work for many of the refugee students. Instead, it hurts them.” “We will only be free by education,” Mutraw said. “We will know when we are treated wrongly and we will know how to come together and makeachange.” How the funding system works Good instruction for English language learners can be expensive, and advocates say Indiana simply isn’t spending enough. The state’s funding method has even drawn criticism from outside the state. Data source: Indiana Department of Education Credits: Sarah Glen/Chalkbeat Schools do receive extra state money for programs for students still learning English — this year about $87 per student for the roughly 55,000 students who qualify. But just eight years ago, schools got almost twice that amount, or $162 per student. Idaho hasasimilar share of English language learners, for example, but spends about $245.42 extra per student, according toanonpartisan group that tracks and compares state education policies, Education Commission of the States. The cuts have made it harder for educators to serve English language learners. Warren Township ELL teacher Carlota Holder said she has about 100 students on her caseload, and she travels between two schools helping students in four grade levels — demands that she said make it impossible for her to give each child the instruction time they deserve. “They are getting left behind,” she said. “They’re not supposed to be, but they are.” Funding for language learning programs also is more volatile in Indiana than in other states because it is not part of the basic school funding formula, making it vulnerable to negotiation in the biennial budget process. ESC reports that just nine states fund language learning this way. Other states have moved away from Indiana’s approach because it can be “more unstable and unpredictable,” according to the group. A proposal to hike support for language learners to $200 per student was included in the Indiana Senate’s budget released earlier this month, but not in the House budget, and its fate is uncertain. “When the dollars aren’t there to provide adequate support, schools struggle,” said Charlie Geier, who oversees the state’s english language learning programs for the Indiana Department of Education. “It’s not equitable by any means.” Shifting federal requirements The funding cutbacks have come at the same time as the state has tightened the rules about testing English language learners. Until 2006, English language learners students could wait three years before taking ISTEP. Instead, they were given an alternative exam that didn’t figure into accountability grades for schools, and teachers could use portfolios of student work to show that they had mastered what they were taught if their test scores didn’t measure up. But that year, federal authorities put states, including Indiana, on notice for not having an adequate testing program for English language learners,amandate of the No Child Left Behind Act. To avoid sanctions, many states, including Indiana, simply began giving English language learners the same tests as everyone else. “Fairness isn’taword that the federal government uses,” said Indiana’s testing director, Michele Walker. “They just say, ‘These are the requirements.’ It’s up to us to provide supports.” Graduation waiversacontroversial practice Some districts have foundaway for their English language learners to graduate despite struggling on state tests by usingacontroversial exemption to strict testing requirements. The state requires students to passa10th-grade English exam andaninth-grade algebra test to graduate from high school. But students who earn C’s in those courses can be freed from the requirement and earnawaiver instead — as long as they have earnedaC average in that subject, secur recommendations from their teacher and principal and jump throughaseries of other hoops. At Southport High School, which hasalarge number of English language learners, 54 seniors got waivers last year and graduated without passing state tests — all but two were English language learners who could not pass the English exam. State lawmakers have urged school districts to cut down of the use of waivers in recent years aftera2012 Indianapolis Star investigation found that Indiana districts have increasingly used them to boost schools’ graduation rates. But Southport Principal Barbara Brouwer said she thinks the waivers are helping English learners, not hurting them. Students who earn waivers go on to college, she said. Some pass advanced classes and get prestigious scholarships. “I cannot, in my heart of hearts, denyakidadiploma because language was their barrier when they arrived and they can’t passastate assessment,” Brouwer said. “There has to be some common sense. You have to consider where people start.” Expectations and reality The state is also setting new, higher expectations for English language learners. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839954/seriespromo.jpg] Indiana adopted new English learning standards at the end of 2013 with the goal of better preparing all students with the academic or job skills they’ll need after graduation, regardless of their their language proficiency. The education department is currently training teachers across the state on the new standards. “Dumbing down the curriculum for that student is not the way to get there,” Geier said. “He might not be proficient in English, but that doesn’t mean he can’t understandacomplex concept.” A new emphasis on providing rigorous coursework to English learners is needed in schools, Feeser said. “You go from this system where we had standards, but nobody really used them — they’re just kind of there — toasystem where we’re trying to completely shift toaculture of shared ownership,” Feeser said. Mutraw said she believesastatewide conversation about the policies that affect English language learners is the only way to help them improve. “A lot more work needs to be done,” Mutraw said. “There’s no point in pretending that things are all right. Things are not all right. We have to work hard to make them all right.” Powered by TypeformThanks to LUNA for providing the translation for this series. [media : https://cdn.vox-cdn.com/uploads/chorus_asset/file/19839960/luna.jpg] Los niños de Indiana aprendiendo inglés están recibiendo menos fondos, más exámenes Defensores dicen que los niños inmigrantes no están recibiendo un trato justo en las escuelas de Indiana El séptimo grado en la Escuela Secundaria Northwest de Indianápolis ibaaser un gran ajuste para Jel Lu Too: Él era un refugiado de guerra de Birmania recién llegado directamente de un campamento de Tailandia que no hablaba inglés y que nunca había asistidoauna escuela formal. Ahora, tenía que tomar el examen estatal de Indiana durante su primera semana de clase. Funcionarios de la escuela dijeron que mandatarios estatales y federales no les dejaron otra opción sobre si se debería administrar el examen. Así que el chico de15-años de edad, se sentó para el examenapesar de que no podía leer, escribir o hablar en inglés. “BienvenidoaEstados Unidos”, dijo Jessica Feeser, quien dirige el programa Escuelas Públicas de Indianápolis para estudiantes del idioma Inglés, caracterizando el mensaje al estudiante. “Ten, toma este examen.” Un número creciente de estudiantes como Jel Lu Too han inundado en Indiana en los últimos años, planteando nuevos desafíos para las escuelas que ya están bajo presión para impulsar resultados de los exámenes. Las escuelas deben capacitarasus profesores, cambiar sus programas de instrucción y aprender nuevas formas de comunicación con las familias – todo con mucho menos apoyo financiero del Estado que en el pasado. Eso es porque el Estado ha recortado los fondos para los estudiantes del idioma Inglésala mitad en la última década, en el momento en que el número de esos estudiantes se incrementó en 30 por ciento. Las reglas del presupuesto crisis y de pruebas tienen defensores preocupados por la forma en que Indiana maneja su creciente población inmigrante. La familia de May Oo Mutraw también huyó guerra civil en Birmania, fueron obligadosaabandonar su hogar para iraun campo de refugiados en Tailandia, donde las clases eran canceladas debidoalos bombardeos. Ahora, como una cofundadora del Centro Comunitario de Birmania por la Educación, que apoyaalos refugiados que asistenalas escuelas en el condado de Marion – yaella no le gusta lo que ve. “Siento que los estudiantes están siendo marginados, dejadosaun lado”, dijo Mutraw. “El sistema como lo es ahora, no vaafuncionar para muchos de los estudiantes refugiados. En lugar de eso, les duele”. “Solo seremos libres por la educación”, dijo Mutraw. “Vamosasaber cuándo se nos trata injustamente y sabremos cómo unirnos y hacer un cambio.” Cómo funciona el sistema de fondos La buena instrucción para estudiantes del idioma inglés puede ser costosa, y los defensores dicen que Indiana simplemente no está gastando lo suficiente. El método de financiación del Estado incluso ha generado críticas desde fuera del estado. Las escuelas reciben dinero del estado adicional para programas para los estudiantes que aún están aprendiendo inglés – este año alrededor de $87 por estudiante por los cerca de 55 mil estudiantes que califican. Pero hace sólo ocho años, las escuelas recibían casi el doble de esa cantidad, o $162 por estudiante. Idaho tiene similitud de los estudiantes del idioma inglés, por ejemplo, pero gasta alrededor de $ 245.42 adicionales por estudiante, de acuerdo con un grupo no partidista que rastrea y compara las políticas de educación del estado, Comisión de Educación de los Estados. Los recortes se han hecho más difícil para los educadores al servicio de los estudiantes del idioma inglés. La profesora del Municipio de Warren, ‘ELL,’ Carlota Holder dijo que tiene alrededor de 100 estudiantesasu carga de trabajo, y ella viaja entre dos escuelas para ayudaralos estudiantes de cuatro diferentes grado – demandas que ella dice hacen imposible para que ella déacada niño el tiempo de instrucción que se merecen. “Se están quedando atrás”, dijo. “No se supone que debe ser así, pero lo están.” La financiación de los programas de aprendizaje de idiomas también es más volátil en Indiana que en otros estados, ya que no es parte de la fórmula básica de financiación de las escuelas, por lo que es vulnerableala negociación en el proceso presupuestario bienal. ESC informa que solo nueve estados dan fondos para el aprendizaje del idioma de esta manera. Otros estados han alejado del enfoque en Indiana, ya que puede ser “más inestableeimpredecible”, según el grupo. Una propuesta para obtener apoyo para estudiantes de idiomasa$ 200 por estudiante fue incluido en el presupuesto del Senado de Indiana publicadoaprincipios de este mes, pero no en el presupuesto de la Casa, y su destino es incierto. “Cuando los dólares no están ahí para proporcionar un apoyo adecuado, las escuelas tienen dificultades”, dijo Charlie Geier, quien supervisa los programas de aprendizaje del idioma inglés del estado para el Departamento de Educación de Indiana. “No es equitativa por cualquier medio.” Requisitos federales cambiantes Los recortes de financiación han llegado al mismo tiempo que el estado ha endurecido las normas sobre los exámenes de los estudiantes del idioma inglés. Hasta 2006, los estudiantes que están aprendiendo inglés podían esperar tres años antes de tomar el ISTEP. En su lugar, se les dio un examen alternativo que no figuraba en la rendición de cuenta de calificaciones, y los maestros podían utilizar portafolios de trabajo de los estudiantes para demostrar que habían dominado lo que les enseñaron si sus resultados de las pruebas no estabanala altura. Pero ese año, las autoridades federales pusieronalos estados, incluyendo Indiana, en aviso por no tener un programa de exámenes adecuado para los estudiantes del idioma inglés, un mandato de la ley “No Child Left Behind.” Para evitar sanciones, muchos estados, incluyendo Indiana, simplemente comenzaronadarlesalos estudiantes del idioma ingles las mismas pruebas que los demás. “La justicia no es una palabra que el gobierno federal utiliza,” dijo la directora de exámenes de Indiana, Michele Walker. “Ellos sólo dicen:” Estos son los requisitos. “Todo depende de nosotros para proporcionar apoyos.” Permisos especiales para graduarse, una práctica controvertida Algunos distritos han encontrado una manera para que sus estudiantes del idioma inglés se gradúenapesar de estar luchando en los exámenes estatales mediante el uso de una exención controvertida para los requisitos de pruebas estrictas. El estado requiere que los estudiantes pasen un examen de inglés del décimo grado y una prueba de álgebra del noveno grado para graduarse de la escuela secundaria. Pero los estudiantes que obtienen C en esos cursos pueden ser liberados de la obligación y ganan un permiso especial – siempre y cuando se hayan ganado un promedio de C en esa materia, recomendaciones seguras de su maestro y director y pasaratravés de una serie de otras pruebas. En la secundaria Southport, que tiene un gran número de estudiantes de inglés, 54 estudiantes del cuarto grado recibieron permisos especiales el año pasado y se graduaron sin pasar los exámenes estatales – todos menos dos eran estudiantes de inglés que no pudieron pasar el examen de Inglés. Los legisladores estatales han instadoalos distritos escolares para reducir el uso de los permisos especiales en los últimos años después de que una investigación en el 2012, Indianapolis Star encontró que los distritos de Indiana los han utilizado cada vez más para aumentar las tasas de graduación de las escuelas. Pero la directora de Southport, Bárbara Brouwer dijo que cree que los permisos especiales están ayudandoalos estudiantes de inglés, no haciéndole daño. Los estudiantes que obtienen permisos especiales vanala universidad, dijo. Algunos pasan clases avanzadas y obtienen becas de prestigio. “No puedo, en mi corazón de corazones, negaraun niño un diploma porque el lenguaje era su barrera cuando llegó y no puede pasar una evaluación estatal”, dijo Brouwer. “Tiene que haber algo de sentido común. Usted tiene que considerar donde comienzan las personas”. Expectativas y realidad El estado también está estableciendo expectativas nuevas y más altas para los estudiantes del idioma inglés. Indiana adoptó nuevos estándares para el aprendizaje del inglésafinales del 2013 con la meta de mejor prepararatodos los estudiantes con las habilidades académicas o de trabajo que necesitaran después de graduarse, sin importar sus capacidades en el idioma. El departamento de educación se encuentra entrenando maestros en todo el estado con estas nuevas normas. “Embruteciendo el plan de estudios para el alumno no es el camino para llegar”, dijo Geier. “Él podría no ser competentes en Inglés, pero eso no significa que no puede entender un concepto complejo.” Se necesita un nuevo énfasis en proporcionar cursos rigurososalos estudiantes de inglés en las escuelas, dijo Feeser. “Se pasa de este sistema donde tuvimos normas, pero nadie realmente las usaba – son estaban allí –aun sistema en el que estamos tratando de cambiar por completoauna cultura de propiedad compartida”, dijo Feeser. Mutraw dijo que cree que una conversaciónanivel estatal sobre las políticas que afectanalos estudiantes del idioma inglés es la única forma de ayudarlesamejorar. “Hay que hacer mucho más trabajo”, dijo Mutraw. “No tiene sentido pretender que las cosas están bien. Las cosas no están bien. Tenemos que trabajar duro para hacerlas bien”. အင်ဒီယားနားမှာ ကလေးများအင်္ဂလိပ်စာသင်ရန်ထောက်ပံ့ကြေးပိုနည်းသွားသည်၊ စာမေးပွဲပိုများလာသည်၊ အားပေးကူညီသူများက ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူကလေးများအတွက် အင်ဒီယားနားကျောင်းများမှာ မျှတမှုမရရှိပါ အင်ဒီယားနားဖလစ်၏ အနောက်မြောက် Northwest အထက်တန်းကျောင်းမှာခုနစ်တန်းတက်ရန် ဂျဲလူထူးအတွက် ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှုကြီးတခုဖြစ်ပါသည်။ သူကအင်္ဂလိပ်စာလုံး၀မတတ် တရားဝင်စာသင်ကျောင်းတခါမှမတက်ရပဲ မြန်မာစစ်ပြေးဒုက္ခသည် တယောက်အဖြစ် ထိုင်းနိုင်ငံစခန်းတခုမှမကြာသေးခင်ကဒိုက်ရိုက်ရောက်လာသည့်သူတယောက်ဖြစ်သည်။ အင်ဒီယားနားအစိုးရစာမေးပွဲကို အခုသူကျောင်းစတက်သည့်ပထမအပတ်အတွင်းမှာစာမေးပွဲဖြေရမည်။ ပြည်နယ်နှင့်ဖယ်ဒရယ်ဥပဒေပြဌာန်းချက်အရ စာမေးပွဲဖြေခိုင်းမလားမဖြေခိုင်းဘူးလားဆိုတာ ရွေးချယ်ခွင့်မပေးထားဘူးဟု ကျောင်း အရာရှိများကဆိုပါသည်။ အဲဒီအတွက် ထို ၁၅ နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားက မဖတ်မရေးမပြောတတ်လည်း သူစာမေးပွဲဖြေရသည်။ “အမေရိကန်မှကြိုဆိုပါတယ်” ဟု အင်ဒီယားနားဖလစ်ပြည်သူ့စာသင်ကျောင်း၏ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ကြားရေးအစီအစဉ် ကိုညွန်ကြားသည့်ဂျက်စီကာ ဖီးစာ Jessica Feeser ကပြောပါသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင် အင်ဒီယားနားမှာ ဂျဲလူထူးလိုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေများလာပြီး စာမေးပွဲအမှတ်ပိုကောင်းအောင်လုပ် ပေးရမည့်ဖိအားပေးမှုနှင့်ယဉ်ဆိုင်နေရသောစာသင်ကျောင်းများအတွက် အခက်အခဲအသစ်များထပ်ပေးသလိုဖြစ်လာသည်။ ကျောင်းများက သူတို့၏ဆရာဆရာမများကိုသင်တန်းပြန်ပေးရမည်။ စာသင်သည့်အစီအစဉ်များပြောင်းလဲရမည်။ ဆက်လက်ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားမိသားစုများနှင့်ဆက်ဆံပြောဆိုရန်နည်းလမ်းအသစ်ရှာရမည် – အားလုံးထဲက အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေး လွန်ခဲ့သောအချိန်ထက်အဆပေါင်းများစွာနည်းသွားသည့်ကြားထဲမှာလုပ်ရမည်။ အဲဒါဟာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူအတွက် အစိုးရက လွန်ခဲ့သည့် ၁၀ နှစ်ကထောက်ပံ့ကြေး၏ထက်ဝက်ကျော်ဖြတ်ခဲ့သည့်အတွက်ဖြစ်ပြီး ထိုကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေ ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း တိုးလာသည့်အချိန်မှာဖြစ်သည်။ ထောက်ပံ့ကြေးလျှော့ချခြင်းနှင့်စာမေးပွဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များသည် ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်နေထိုင်သူလူဦးရေတိုးလာ ခြင်းအပေါ် အင်ဒီယားနားကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေပုံကို အားပေးကူညီသူများကစိုးရိမ်ကြပါသည်။ မေဦး မူတရော May Oo Mutraw ၏မိသားစုလည်း မြန်မာနိုင်ငံပြည်တွင်းစစ်မှထွက်ပြေးခဲ့ပြီး၊ သူတို့အိမ်မှထိုင်းနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်စခန်းသို့အတင်းအတမရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသည်။ သူတို့နေရပ်ဒေသမှာ ဗုံးအကြဲခံရသည့်အတွက် တခါတရံအတန်းများကို ရပ်ထားရသည်။ အခု၊ ပညာရေးအတွက်မြန်မာလူ့အသိုင်းအဝိုင်းစုဝေးရာဌာန Burmese Community Center for Education ကိုပူးတွဲဖွဲ့စည်းသူအဖြစ် မေရီယံကောင်တီမှာကျောင်းတက်နေသည့်ဒုက္ခသည်များကိုကူညီပံ့ပိုးပေးပြီး သူမြင်တွေ့ရ တာကိုသူမကြိုက်ပါ။ “ကျောင်းသူကျောင်းသားများက ဘေးဖယ်ထားခြင်း၊ ဘေးဘက်ထုပ်ပယ်ထားခြင်းခံနေရတယ်လို့ ကျမခံစားရတယ်” ဟု မူတရော ကပြောပါသည်။ “အခုလက်ရှိစနစ်က ဒုက္ခသည်ကျောင်းသူကျောင်းသားတော်တော်များများအတွက်အကျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ အကျိုးဖြစ်မဲ့အစားသူတို့ကိုထိခိုက်တယ်။” “ကျမတို့က ပညာရေးနဲ့မှလွတ်မြောက်မယ်” ဟု မူတရောပြောပါသည်။ “ကျမတို့ကိုမတရားဆက်ဆံရင်ကျမတို့သိမှာပါ။ ပြီးတော့ ကျမတို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်မလဲဆိုတာသိရမှာပါ။” ထောက်ပံ့ကြေးစနစ်အလုပ်လုပ်ပုံ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်ကောင်းသည့်သင်ကြားပို့ချမှုဟာ ကုန်ကျစရိတ်များနိုင်ပြီး အင်ဒီယားနားကလုံလောက်စွာမသုံး ဘူးဟု အားပေးကူညီသူများကပြောပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရ၏ထောက်ပံ့ကြေးနည်းစနစ်ဟာ ပြည်နယ်၏ပြင်ပအခြေားနေရာ အတွက်တောင်မှ ဝေဖန်စရာဖြစ်လာသည်။ စာသင်ကျောင်းများက အင်္ဂလိပ်စာသင်နေသည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားများအတွက် ပြည်နယ်အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးအပိုရရှိပါ သည် – ဒီနှစ်မှာ ထောက်ပံ့မှုရသင့်သည့်ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၅၅၀၀၀ မှာ တယောက်ကို ၈၇ ဒေါ်လာခန့် ရရှိသည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သည့်ရှစ်နှစ်အချိန်က စာသင်ကျောင်းများဟာ အဲဒီငွေပမာဏထက်နှစ်ဆလောက် ကျောင်းသူကျောင်း သားတယောက်အတွက် ၁၆၂ ဒေါ်လာ ရရှိသည်။ ဥပမာအနေဖြင့် အိုင်ဒါဟိုမှာအင်္ဂလိပ်စာသင်သူလူဦးရေချင်းတူပါသည်။ သို့သော် ပြည်နယ်ပညာရေးမူပေါ်လစီများကိုစုဆောင်း ပြီးနှိုင်းယဉ်ကြည့်သည့်သီးခြားလွတ်လပ်အဖွဲ့တဖွဲ့ဖြစ်သောပြည်နယ်များပညာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့၏အဆိုအရ ကျောင်းသူကျောင်း သားတယောက်အတွက်အိုင်ဒါဟိုက၂၄၅²၄၂ ဒေါ်လာပိုသုံးသည်။ ထောက်ပံ့ကြေးဖြတ်တောက်ခြင်းသည် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကိုကူညီဆောင်ရွက်ရန် ပညာသင်ပေးသူများအတွက် ပိုခက်ခဲစေ သည်။ ဝါရင်မြို့အုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေကအင်္ဂလိပ်စာဆရာမတယောက်ဖြစ်သူ ကာရ်လိုတာ ဟိုးလ်ဒါ Carlota Holder မှာ ကျောင်းသူကျောင်းသားအယောက်ပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ရှိသည်။ စာသင်ကျောင်းနှစ်ကျောင်းကို သွားလိုက်လာလိုက် အတန်းလေးတန်း မှာရှိသောကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုကူညီသည် – ဒီလိုအပ်ချက်များကြောင့် ကလေးတယောက်ချင်းရသင့်သည့်အချိန်ပေး စာသင်ပေးရန် ဘယ်လိုမှမဖြစ်န်ိုင်ပါဟု သူပြောပြပါသည်။ “သူတို့က အနောက်မှာချန်ထားခြင်းခံနေရတယ်” ဟုသူပြောပါသည်။ “သူတို့က အဲလိုမကျန်ခဲ့သင့်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ကျန်နေတယ်။” ဘာသာစကားသင်ပေးသည့်အစီအစဉ်များအတွက်ထောက်ပံ့ကြေးလည်း အခြားပြည်နယ်ထက် အင်ဒီယားနားမှာပိုပြီးမတည် ငြိမ်ပါ။ အကြောင်းရင်းက အခြေခံပညာရေးထောက်ပံ့ကြေးပုံသေနည်းမဟုတ်သည့်အတွက် နှစ်နှစ်တကြိမ်ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်ရေး ဆွဲရာတွင် ညှိနှိုင်းမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရသည်။ ပြည်နယ်များပညာရေးကော်မရှင်အဖွဲ့က ပြည်နယ်ကိုးခုမှာဒီလိုထောက်ပံ့ကြေးစနစ်မျိုးအသုံး ပြုကြသည်ဟု တင်ပြထားပါသည်။ အခြားပြည်နယ်များသည် အင်ဒီယားနား၏ချဉ်းကပ်ပုံမှပြောင်းလဲသွားခဲ့ကြပြီး။ အကြောင်းရင်း က ထိုအဖွဲ့၏တင်ပြချက်အရ “ပိုပြီးမတည်ငြိမ်မှုနှင့်ကြိုခန့်မှန်းရခက်ခဲ”သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် ထောက်ပံ့သည့်အနေဖြင့် ကျောင်းသူကျောင်းသားတယောက်ကို ဒေါ်လာ ၂၀၀ သို့တိုးပေးရန်အဆို ပြုချက်ကို ဒီလအစောပိုင်းက အင်ဒီယားနားဥပဒေပြုအထက်လွှတ်တော်၏ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်မှာပါဝင်သည်။ သို့သော် အောက် လွှတ်တော်၏ဘဏ္ဍာငွေဘတ်ဂျက်မှာမပါပါ။ အဲဒီအဆိုပြုချက်၏ကံကြမ္မာဟာ မသေချာပါ။ “ထောက်ပံ့မှုဖူလုံအောင်ဒေါ်လာငွေမရှိရင် စာသင်ကျောင်းများက ရုန်းကန်ရတယ်” ဟု အင်ဒီယားနားပညာရေးဌာနအတွက် အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ပေးသည့်အစီအစဉ်များကိုကြီးကြပ်သူ ချာလီ ဂိုင်းရာ Charlie Geier ကပြောပါသည်။ “ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှမလုံလောက်ဘူး။” ဖယ်ဒရယ်သတ်မှတ်ချက်များပြောင်းလဲခြင်း ထောက်ပံ့ကြေးလျှော့ချသည့်တချိန်ထဲမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူအတွက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရန်ပြည်နယ်အစိုးရ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများပိုကြပ်လာသည်။ ၂၀၀၆ ခုနှစ်အထိ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်ယူသူများအတွက် အိုင်းစတက်ခေါ်အင်ဒီယားနာတပြည်နယ်လုံးပညာရေးဆိုင်ရာ စာမေးပွဲအစီအစဉ် စာမေးပွဲမဖြေမီသုံးနှစ်စောင့်နေနိုင်သည်။ အိုင်းစတက်အစား အစားထိုးစာမေးပွဲဖြေပြီး ကျောင်းအတွက်တာဝန်ခံ အမှတ်စရင်းထဲထည့်မတွက်ပါ။ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ၏အမှတ်မမှီလျှင် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသင်ရသည့်အရာများကို နားလည်တတ်ကျွမ်းမှုရှိကြောင်းသက်သေပြရန် သူတို့စာသင်သည့်မှတ်တမ်းစာရွက်စာတမ်းများအသုံးပြုလို့ရပါသည်။ သို့သော် အဲဒီနှစ်မှာ၊ ဖယ်ဒရယ်အရာရှိများက အင်ဒီယားနားအပါအဝင်ပြည်နယ်အစိုးရများကို ဘယ်ကလေးမှမကျန်ခဲ့ရဥပဒေပြ ဌာန်းချက်အရ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်စာမေးပွဲစစ်ဆေးရာတွင်မလုံလောက်ပါဟု သတိပေးသည်။ အရေးယူမှုကိုရှောင်ရန်အတွက် အင်ဒီယားနားအပါအဝင် ပြည်နယ်အတော်များများက အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများကို လူတိုင်းဖြေဆို သည့်စာမေးပွဲစဖြေခိုင်းပါတော့သည်။ “တရားမျှတမှုစကားလုံးကို ဖယ်ဒရယ်အစိုးရမသုံးဘူး” ဟု အင်ဒီယားနားစားမေးပွဲညွှန်ကြားသူ မိရှဲ ဝါကါ Michele Walker ကပြောပါသည်။ “သူတို့က ‘ဒါတွေဟာသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်တယ်’လို့ပြောတယ်။ ကူညီပံ့ပိုးမှုပေးဘို့တော့ ကျမတို့အပေါ် မှာမူတည်တယ်။” ကျောင်းအောင်ရန်သက်ညှာခွင့်ပေးခြင်းသည်အငြင်းပွားစရာဖြစ်သည့်လုပ်ရပ်ဖြစ်သည် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများက ပြည်နယ်စာမေးပွဲတွင်ရုန်းကန်ရသော်လည်း စည်းကမ်းတင်းကြပ်သောစာမေးပွဲသတ်မှတ်ချက်ကို အချို့ ဒေသများမှာ အငြင်းပွားစရာဖြစ်သောချွင်းချက်ကိုအသုံးပြုပြီး ကျောင်းပေးအောင်မည့်နည်းလမ်းတွေ့ရှိပါသည်။ ပြည်နယ်အစိုးရက ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အထက်တန်းကျောင်းအောင်ရန်အတွက် ၁၀ တန်းစာမေးပွဲအောင်ပြီး ကိုးတန်းအက္ခရာသင်္ချာစာမေးပွဲ အောင်ရမည်ဟုသတ်မှတ်ချက်ချထားသည်။ သို့သော် ထိုအတန်းများမှာ C အောင်မှတ်အဆင့်ရရှိလျှင် သတ်မှတ်ချက်များမှလွတ်ကင်းပြီးသတ်မှတ်ချက်အစားသက်ညှာခွင့် အစားထိုးရရှိသည် – သူတို့က ထိုဘာသာရပ်မှာပျမ်းမျှ C အမှတ်ရရှိခြင်း၊ ကျောင်းဆရာဆရာမနှင့်ကျောင်းအုပ်ထောက်ခံချက် ရရှိခြင်းနှင့် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ကျော်သွားအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းများရှိနေသမျှ သက်ညှာခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ ဆောက်ပို့အထက်တန်းကျောင်းမှာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူလူဦးရေများစွာရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့်နှစ်မှာ နှောက်ဆုံးနှစ်ကျောင်းသူကျောင်းသား ၅၄ ယောက်က သက်ညှာခွင့်ရရှိခဲ့ပြီး ပြည်နယ်စာမေးပွဲမအောင်ပဲ ကျောင်းအောင်ခဲ့သည် – နှစ်ယောက်မှလွဲပြီး အားလုံးက အင်္ဂ လိပ်ဘာသာရပ်စာမေးပွဲမအောင်နိုင်သော အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားသင်နေသူများဖြစ်ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များမှာ ကျောင်းအောင်နှုန်းပိုကောင်းအောင် အင်ဒီယားနားစာသင်ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသများက သက်ညှာခွင့် အသုံးပြုကြသည်ဟု အင်ဒီယားနားဖလစ်စတားသတင်းစာမှစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်ဥပဒေပြဌာန်းသူများက ကျောင်း များကိုသက်ညှာခွင့်သုံးသည့်နှုန်းလျှော့ခိုင်းသည်။ သို့သော်ဆောက်ပို့ကျောင်းအုပ် ဘားဘရာဘရိုးဝါအနေဖြင့် သက်ညှာခွင့်သုံးခြင်း ဟာ အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည်၊ ထိခိုက်မှုမဟုတ်ပါဟုသူပြောပါသည်။ သက်ညှာခွင့်ရရှိသည့် ကျောင်းသူကျောင်းသားများသည် တက္ကသိုလ်ကောလိပ်သို့သွားကြသည်ဟုသူပြောပြပါသည်။ တချို့ကအဆင့်မြင့်အတန်းများ အောင်ပြီးအထက်တန်းပညာတော်သင်ထောက်ပံ့ကြေးရရှိသည်။ “ကျမသဘောကတော့ ကလေးများကိုသူတို့ရောက်လာသည့်အချိန်မှာ ဘာသာစကားကအဟန့်အတားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပြည်နယ်စာမေးပွဲမအောင်နိုင်လို့ အောင်လက်မှတ်မငြင်းနိုင်ဘူး” ဟု ဘရိုးဝါကပြောပါသည်။ “လက်တွေ့ကျကျဖြစ်ရမယ်၊ သူတို့ ဘယ်နေရာမှစဝင်လဲဆိုတာထည့်စဉ်းစားပေးရမယ်။” သတ်မှတ်ချက်များနှင့်လက်တွေ့အဖြစ်အပျက် ပြည်နယ်အစိုးရလည်း အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် ပိုတင်းကြပ်သောသတ်မှတ်ချက်အသစ်ချမှတ်သည်။ အင်ဒီယားနားအနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်ကြားပို့ချမှုအဆင့်အသစ်တခု ၂၀၁၃ အကုန်မှာချမှတ်ခဲ့ပြီး ကျောင်းသူကျောင်းသားအား လုံးကို ကျောင်းပြီးသည့်နောက်ပိုင်းလိုအပ်မည့်စာပေသို့မဟုတ်အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုများအတွက် ဘာသာစကားတတ် ကျွမ်းသည်ဖြစ်စေမတတ်သည်ဖြစ်စေ ပိုကောင်းသည့်ပြင်ဆင်မှုမျိုးကိုရည်ရွယ်ပြီးချမှတ်ခဲ့သည်။ ပညာရေးဌာနက တပြည်နယ်လုံးမှာရှိသောကျောင်းဆရာဆရာမများကို အဲဒီသင်ကြားပို့ချမှုအဆင့်အသစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သင် တန်းများပေးနေသည်။ “သင်ရိုးညွှန်းတမ်းအဆင့်လျှော့ချခြင်းသည် ကျောင်းသူကျောင်းသားများရှေ့ဆက်ရန်အတွက်မကောင်းပါ” ဟု ဂိုင်းရာ Geier ကပြောပါသည်။ “အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းသူမတတ်ရင် မတတ်တဲ့အတွက် ခက်ခဲရှုပ်ထွေးသည့်အမြင်အယူအဆများကို သူနားမလည်ဘူးလို့အဓိပ္ပါယ်မရှိပါဘူး။” အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအတွက် စာသင်ကျောင်းများမှာတင်းကျပ်သည့်စာသင်ကြားမှုဘက်ကို ဦးစားပေးရမည်ဟု ဖီးစာ Feeser က ပြောပါသည်။ “ဒီလိုအဆင့်ရှိလဲ-ရှိနေတာပဲဖြစ်တယ်-ဒီကဘယ်သူမှမသုံးတဲ့စနစ်မှ၊ စုပေါင်းပိုင်ဆိုင်သူယဉ်ကျေးမှုသို့လုံး၀ပြောင်းလဲဘို့ကြိုးစားနေ တဲ့စနစ်သို့သွားနေတယ်” ဟု ဖီးစာကပြောပါသည်။ မူတရော Mutraw အနေဖြင့် အင်္ဂလိပ်စာသင်သူများအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသောမူပေါ်လစီနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြည်နယ်အ လိုက်ဆွေးနွေးမှသာ သူတို့အတွက်တိုးတက်မည့်အထောက်အကူဖြစ်မှာကိုသူယုံကြည်သည်ဟုပြောပါသည်။ “လုပ်စရာအများကြီးရှိပါတယ်” ဟု မူတရောကပြောပါသည်။ “အားလုံးကောင်းနေတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေတာ အဓိပ္ပါယ်မရှိဘူး။ အရာရာတိုင်းကောင်းမနေဘူး။ အားလုံးကောင်းအောင် ကျမတို့ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးရမှာ။” Chalkbeat isanonprofit news site covering educational change in public schools.https://in.chalkbeat.org/2015/4/23/21100657/indiana-kids-learning-english-are-getting-less-funding-more-testing